Ifulethi i-Ciesa la Verda Mountain House Dolomites - I-Airbnb
Ifulethi i-Ciesa la Verda Mountain House Dolomites
Rocca Pietore, Belluno, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Germano
U-Germano Ungumbungazi ovelele
"I-Ciesa la Verda" iseduze ne-Marmolada kanye "ne-Serrai di Sottoguda" i-Nature Reserve, i-canyon emangalisayo nengcolile, ithempeli lemvelo.
Ifulethi lazalwa kusukela ekulungiseni okunembile, okwakha isimo esifudumele nesithokomele. Besifuna ngokuqinile ukugcina isitayela sethu esivamile nesendabuko, kodwa futhi sigcwalise ifenisha enakho konke ukunethezeka kwesimanje.
Ikamelo lokulala, ngokwesibonelo, laliyi- "stua" (igumbi lethu lokuphumula lendabuko) elenziwe ogogo bethu.
Futhi ekhishini sagcina i- "larin" yasendulo (indawo yomlilo lapho ukudla okukodwa kwaphekwa khona ngokuqondile emlilweni).
Konke kucatshangelwa ukuthi kunikeza isimo esihle kakhulu se-dolomitic ezivakashini zethu.
4.91 · 97 okushiwo abanye
Umndeni we-Dell 'Antonio, ujabule ngempela ukukwamukela ekhaya lawo ukuze wenze unambithe iholide elingenakulibaleka endaweni yamagugu e-UNESCO ye-UNESCO.
"I-Ciesa la Verda" itholakala ezinyathelweni ezimbalwa nje ukusuka e-Natural Park of the "Serrai di Sottoguda", ithempeli elihle nelinemvelo. Indawo yayo enobuhlakani, ivumela abathandi be-Ice Climbing ukuba bajabulele enye yezindawo ezinhle kakhulu nezivuselelayo emhlabeni. Ukuba phakathi kwe-Big World War Tour, kuyisisombululo esiphelele sabashushuluza eqhweni abangase bafinyelele ekuqaleni kwezikhungo ze-Marmolada ne-Padon ski. Ehlobo yisiqalo esihle kakhulu sohambo lwezinyawo namabhayisikili amaningi.
Ciao sono Germano e con mia moglie Monika gestiamo il B&B e l'appartamento" Ciesa La Vèrda". La nostra Mountain House si trova a pochi passi dai magnifici Serrai Di Sottoguda…
UGermano Ungumbungazi ovelele